Sidee ayuu ninkan saddex jeer uga badbaaday xukun dil ah? - BBC News Somali
Sidee ayuu ninkan saddex jeer uga badbaaday xukun dil ah?
21 Febraayo 2019
Byson Kaula oo u dhashay dalka Malawi wuxuu saddex jeer ka badbaaday xukun dil ah, balse habka uu ku badbaaday ninkan ayaa dad badan ka yaabisay.
Booliskii fulinaayey falkaan oo heystay liis ay ku qoranyihiin maxaabiistii lagu fulin lahaa dilka ayaa dhowr jeer waxaa ka badbaaday ninkan.
Ninkan ayaa dafiray dembiga lagu soo oogay, isagoo sheegay inay ka dambeeyeen dad dariskiisa ah oo ka maseyrsanaa, waxaana dacwaddani lagu soo oogay sannadkii 1992-dii, xilligaas oo lagu soo eedeeyey in uu qof dilay.
"Waa xilligii ay murugada ii billaabatay," Ayuu yiri.
Byson waxa uu sheegay in lasoo weeraray mid ka mid ah shaqaalihiisa, loona gaystay dhaawac. Ninkan oo xilligaas aanan awoodin inuu socdo ayaa waxaa caawiyay Byson, hasayeeshee roob badan oo da'ayey xiligaasi ayaa Byson waxaa dhulka uga dhacay ninkii dhaawaca ahaa oo markii dambe ku dhintay isbitalka.
Arrintaasi ayaa waxay keentay in ninkan oo afartan sano jir ahaa xiligaasi lagu eedeeyay in uu dilay ninkii uu caawiyay, taasi oo keentay in lagu xukumo dil.
Iiraan oo dil ku xukuntay nin degenaansho ka haysta Sweden
Nasiib darro, dadkii dariska ahaa ee ka ag dhawaa ayaa ku marqaati furay markii la geeyey Maxkamadda.
Byson hooyadiis oo ku sugnayd goobtii lagu xukumayey wiilkeeda ayaa u adkaysan weyday been abuurka laga sheegay oo waa ay iska oyday.
"Markii la ii sheegay in la iiga baahanyahay in aan tago goobta dadka lagu daldalo, waxaan dareemay in aan ahay qof dhintay oo kale." Ayuu yiri Byson.
Byson waxaa uu xasuustaa in maalin magaciiisa lagu daray liiska 21 qof ee la daldali lahaa saacado gudahood. Mid ka mid ah waardiyayaasha ayaa waxa uu u sheegay in daqiiqadaha soo socdo la daldali doona.
Ku dhawaad 170 maxaabiis ah ayaa lagu wadaa in dacwad kale loo furo, halka 139 ka mid ah dacwadihii loo heystay lagala noqday. Kala bar dadkan ayaa la ogaaday in aysan wax dembi ah gelin.
Markii ay garsoorayaashu sheegeen inay doonayaan in maxkamadda dib ugu celiyaan, Byson waa uu ka diiday, isagoo wali ka naxsan xukunkii ugu horreeyey ee lagu riday. Hasyeeshee markii xaakimka maxkamadda uu ku dhawaaqay inuu yahay qof xor ah waa uu maleeysan kari waayey.
"Waardiyeyaasha xabsiga ayaa igu yiri xor ayaad tahay, balse waan aqbali waayey, waxayna ila noqotay inaan riyoonayo oo kale. Ma aanan aaminin waxaa uu garsooraha sheegay." Ayuu raaciyay.
Wixii intaa ka dambeeyay dowladda Malawi waxay joojisay in si wadajir ah loo daldalo maxaabiista ku xukuman dilka.
Byson oo kaliya ma ahan dadka ku farxay arrintan, balse sidoo kale waxaa aad ugu farxay qoyskiisa oo ay hooyadii ugu horayso.
Hooyo Lucy waxa ay wiilkeeda soo booqan jirtay sannad walba xilliga loogu tala galay in la daldalo. Dhaqaalaha soo galo ayey sannadkii oo dhan uruurin jirtay si ay ugu adeegsato safarka ay kusoo arkeyso wiilkeeda.
Markii uu xabsiga ka soo baxay Byson, waxaa loo qaaday xarun gaar ah, si loo baro xirfado cusub, haatan se waa 60 sano jir.
Maalmaha fasaxa ah waxa uu dib ugu laabtaa xabsiyada, si uu u dhiirageliyo ama u waaniyo kuwa kale ee wajahaya dhibaatooyinkii uu soo maray.